Wasiirka wasaradda arimaha dibada oo dhigiisa Turki kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka wasaradda arimaha dibada oo dhigiisa Turki kala hadlay xoojinta xiriirka labada...
Wasiirka wasaradda arimaha dibada oo dhigiisa Turki kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal
Wasiirka arrimaha dibedda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Amb Axmed Ciise Cawed iyo Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Bekar, ayaa ka wada hadlay habka loo xoojin karo wada shaqaynta Labada Dal.
Kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagu Lafa guray sidii Dowladda Turkiga ay usii Laba jibbaari lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya.
Intii lagu guda jiray kulanka ayaa labada dhinac waxay is dhaafsadeen arrimo dan u ah Labada dal, waxayna sidoo kale isla soo qaadeen sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka qotoda dheer ee ka dhexeeya Labada Waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga Walaaltinimo ee wax wada qabsi.
Safiirka Turkiga Olgan Bekar ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu adkayn doono xiriirka ka dhexeeya Labada dhinac, wuxuna sheegay inuu dhankiisa adkayn doono doorkooda ku aaddan garab istaagga iyo gargaarka ay siiyaan walaalahooda Soomaaliya.
Previous articleMadaxweyne Waare oo baaq u diray dowladda dhexe iyo QM.
Next articleWajigii labaad ee dib u eegista dastuurka dalka oo ka bilaawday Muqdisho